Olee otú Digital Lead Capture na-agbanwe | Martech Zone
Olee otú Digital Lead Capture na-agbanwe
Monday, October 24, 2016 Monday, October 24, 2016 Muhammad Yasin
E nwedịrị oge iduga ndu. N'eziokwu, ọ bụ ọtụtụ azụmaahịa jikwaa nweta azụmahịa. Ndị ahịa gara na ebe nrụọrụ weebụ gị, ha dejupụtara mpempe akwụkwọ na-achọ ozi, ị nakọtara ozi ahụ wee kpọọ ha. Dị Mfe, nri? Ehh… ọ bụghị ka ị chere.
Ebumnuche, na nke ya, bụ nzuzu dị mfe. Na tiori, o gha adi nma iwepu otutu ndu. O di nwute, obughi ya. Agbanyeghị na ọ dị mfe mfe afọ iri gara aga, ndị na-azụ ahịa atụkwuola ụjọ ịhapụ ịhapụ ozi ha. Nkwenye bụ na ha (onye na-azụ ahịa) ga-abanye ozi ha n'ụdị (n'ebumnuche nke inweta ozi) ma a ga-akpọ ha oku ekwentị, ozi ịntanetị, ederede, ozi ederede na ihe ndị ọzọ. Agbanyeghị na nke a abụghị ikpe maka azụmaahịa niile, ụfọdụ nwere ma na-atụ anya atụmanya ndị a - ma ọ na-ewe oke iwe.
N'ikwu ya, ndị na-ere ahịa dị ole na ole na-ejuputa ụdị ndu dị iche iche.
Ugbu a, mgbe m kwuru ụdị ụzọ dị iche iche, ana m ekwu ụdị dị mkpụmkpụ nwere ihe gbasara 4-5 oghere maka ozi ịkpọtụrụ gị (aha, nọmba ekwentị, email, adreesị, wdg) na ikekwe ngalaba nkọwa iji jụọ ajụjụ ọsọ ọsọ ma ọ bụ nye nzaghachi. Formsdị a anaghị eburu ọtụtụ ohere na ibe (yabụ na ha anaghị eche echiche), mana ha anaghị enye ndị ahịa ihe ọ bụla bara uru.
N'ọtụtụ oge, ndị na-azụ ahịa na-ejuputa ozi ha ka ha wee nwee ike ịnweta ozi ndị ọzọ (site na azụmaahịa) ma emechaa. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe dị njọ na nke a, ozi ndị ọzọ ndị ahịa na-arịọ ga-agbanwe ghọọ ahịa. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa na-anata ozi ha rịọrọ, ha nwere ike ọ gaghị achọ ka ere ya naanị - ọkachasị ma ọ bụrụ na ha ka nọ na mpaghara nyocha ahụ.
Gendị mkpụrụ ndụ ihe nkedo na-adịgide adịgide ka dị gburugburu, mana ha na-anwụ ngwa ngwa iji mepụta ụzọ maka usoro ndị ọzọ nke usoro ọgbara ụzọ dijitalụ. Formsdị ndị na-eduga (ma ọ bụ nyiwe karịa) na-abụ ndị mara mma na ndị tozuru oke iji nweta mkpa na mkpa ndị ahịa - na-enye ndị na-azụ ahịa ihe kpatara iji nye azụmahịa ahụ ozi ha. Nke a bụ otu ụzọ ndu dijitalụ si agbanwe:
Dị Lead Gen na-aghọ “mmekọrịta” na “itinye aka”
Dị ndu na-eduzi static bụ naanị na: ha bụ nke a. Ha anaghị adọrọ adọrọ; na hoo haa, ha dị ka ihe na-agwụ ike. Ọ bụrụ na ọ na-agwụ ike (ma ọ bụ ka njọ, ọ dịghị ka ihe ziri ezi), ọ ga-abụ na ndị ahịa na-ejuputa ozi ha dị ntakịrị. Ọ bụghị naanị na ndị na-azụ ahịa chọrọ iche na ihe dị jụụ ma ọ bụ ihe ụtọ na-abịa n'ụzọ ha (ma ọ bụrụ na ihe niile na-enwu gbaa ma na-egbukepụ egbukepụ, ọ nwere ike bụrụ naanị), ha chọrọ ijide n'aka na anaghị erere ozi ha na ndị ọzọ nke 3 ma ọ bụ jiri ya eme ihe na-akwadoghị. Ha choro ima n’ozi n’aga n’onye ha kwuru na o ga.
Otu n'ime ihe kachasị na-eme na-eduga n'ụdị bụ na ha na-aghọ sleek, na-emekọrịta mmekọrịta ma na-etinyekwu aka.
Kama ụdị nke na-ajụ maka ozi kọntaktị dị mfe, a na-ajụkwu ajụjụ - yana iji gbochie nkụda mmụọ, a na-ewepụta ajụjụ ndị a n'ụzọ pụrụ iche.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela iji menu ọdịda, ọtụtụ nhọrọ, na ọbụnadị ederede ederede iji hụ na onye na-azụ ahịa na-elebara ha anya mgbe niile. Ọzọkwa, ụdị ndu na-aghọwanye nke a na-ahụkarị, ụlọ ọrụ azụmaahịa nweziri ike ịjụ ajụjụ ndị ga-amasị onye ahịa. Kama inwe mmetụta dị ka ngwa, usoro a gbanwere ọhụrụ dị ka dejupụta profaịlụ - nke enwere ike izigara onye na-ere ahịa nke ga-enyere ha aka karịa ịre ha.
A na-enye ndị ahịa ezigbo Uru
Ọ bụrụ n’ịlaghachi azụ n’ihe dị ka afọ ise, ikekwe ị ga-echeta na ọtụtụ n’ime ihe mejupụtara akwụkwọ bụ nanị ụzọ ị ga-esi rịọ maka ozi ndị ọzọ. Ga-etinye ozi kọntaktị gị, ma eleghị anya ụfọdụ ozi mmasị, ị ga-akụrịrị n'okpuru ma chere ka mmadụ kpọtụrụ gị. Mgbe ụfọdụ ị ga - edebanye aha maka akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ ihe yiri ya - mana n'ezie, ọ nweghị ihe dị mkpa.
Ngwa ngwa afọ ise ahụ, anyị na - achọpụta ugbu a yana ụdị ọnụọgụ na - apụ, mejupụta ụdị ndu na - aghọ ihe mgbanwe. Kama ị nweta nzaghachi dịka “Daalụ maka itinye ụdị gị. Otu onye ga - eru aka n'oge na - adịghị anya, ”a na - agwọ ndị ahịa ozugbo na ntinye ngwaahịa / ọrụ, ego, na n'ọtụtụ ọnọdụ dịka mbubreyo, nsonaazụ nyocha!
Otu n'ime ihe ndị ọhụrụ ndị ọbịa na-atụ anya na ebe nrụọrụ weebụ na-atụ anya bụ ịme nyocha na dejupụta nyocha.
Ezigbo ihe atụ nke a ga - abụ “Kedu ụdị ụgbọ ala kwesịrị gị?” ntule. Nke a bụ ụdị nke ntule anyị nwere ike ịhụ onwe anyị na-enye ndị ahịa ụgbọ ala anyị maka ebumnuche nke na-ewepụta ahịa ụgbọ ala ọhụrụ. Na nyocha a, onye na-azụ ahịa na-aza ajụjụ ụfọdụ gbasara mmasị ịzụ / ịnya ụgbọ ha. Ozugbo ha nyefere azịza ha, a na-ewepụta nsonaazụ ha ozugbo. Iji mee nke a, n'ezie, ha kwesịrị ịnye ozi kọntaktị ha. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa na-achọ ịmata ihe zuru oke (na anyị nwere olile anya na ha dị), ha ga-etinye email ha, ha ga-enweta nsonaazụ ha.
Kama inye ma were ụdị ndapụta, ụdị ndu na-emekọrịta mmekọrịta; na-eme ka mgbanwe dị nhata n'etiti ndị na-azụ ahịa na azụmahịa.
Ọ bụrụ na onye na-azụ ihe dejupụtara “Whatgbọala dị a foraa ka ọ dị mma maka gị?” nyocha ma kwuo na ha nwere nnukwu ezinụlọ, ha nwere ike ịnweta akwụkwọ ego iji nwalee ịnya ụgbọ ala. Ma ọ bụ, nke ka mma, ha nwere ike ịnweta onyinye $ 500 ozugbo na ụgbọ ala ezinụlọ. Mgbe a bịara n'inye ndị na-azụ ahịa uru, ohere ha nwere enweghị njedebe.
Site na teknụzụ na-emewanye ngwa ngwa dị ka ọ dị, ọtụtụ ndị na-enye ụdị mpempe akwụkwọ nwere ike were ozi nke ndị ahịa na-abanye n'ụdị ndu ma gbanwee ya ka ọ bụrụ onyinye dị oke mkpa nye ndị na-azụ ahịa. Formsdị ndu abụghịzi ihe ha bụbu. Ha abanyela n'ime ihe karịrị ihe ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ichetụ n'echiche. Dika teknụzụ na-edu ndú na-aga n'ihu na-emewanyewanye ma na-agbanwe, ụdị dị mkpa ka ha gbanwee usoro idu ndú ha!
Tags: nyocha ndị ahịanjide ndị na-ebu ụzọnjide ndu dijitalụọdịnaya mmekọrịtaahụmahụ mmekọrịtannyemaka mmekọrịtaijide ịntanetịndu ndu
Muhammad Yasin bụ Director nke Marketing na PERQ (www.perq.com), na onye edemede bipụtara, nwere nkwenye siri ike na mgbasa ozi ọtụtụ ọwa nke na-eweta nsonaazụ site na ọdịnala na dijitalụ. A matawo ọrụ ya maka oke mma na mbipụta dịka INC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb, na Buzzfeed. Nzụlite ya na arụmọrụ, Mmata Azụmaahịa, na Usoro Ahịa Ahịa na-ebute nsonaazụ data maka okike na mmezu nke mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi.